जबजको सुगा रटाईमा नेकपा चल्दैन: नेता सिंह – Karnalisandesh
जबजको सुगा रटाईमा नेकपा चल्दैन: नेता सिंह
प्रकाशित मितिः १० श्रावण २०७७, शनिबार १३:२३ July 25, 2020
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद झन् गहिरिदो अवस्थामा पुगेको छ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्को अध्यक्ष्य प्रचण्ड-माधव खेमाबीच चलिरहेको वाक्य युद्धले उल्लेखित कुरालाई पुष्टि गर्छ। यसै क्रममा अनेरास्ववियूकी केन्द्रीय नेता पञ्चा सिंहले नेकपाको विधि, बिधान र दस्तावेज पोलेर खान बनाईएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत उनले पार्टी एकता हुँदा तया गरिएका दस्तावेजहरु लेख्न र सुन्ने व्यक्ति फरक हुन् या फरक ? भन्दै अर्को प्रश्नसमेत गरेकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारीक दस्तावेजमा जनताको जनबाद लेख्ने, देख्ने र सुन्ने ब्यक्ति यिनै हुन् कि फरक थिए होला ? सधै राजनीतिमा छलकपट जालझेल चलिरहन सक्छ र ? विधि, बिधान र दस्तावेज पोलेर खान बनाइएको हो र ?’
उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘पार्टीका आधिकारीक विचार आदर्श र मूल्य, मान्यता बिपरित कसैको रवाफ र दबाब पञ्चायतमा पनि त नटिकेको हो नि। यो (नेकपा) हो जबजको सुगारटाई र मनपरी नेकपामा चल्ने विषय होइन÷छैन। यहाँ विधि, बिधानको सर्वोच्चता चल्छ।’